*Ikhabhinethi yaMaplanga eyohlukileyo* iibhedi ezi-4 ezinemizuzu engama-20 ukusuka eTyeya - I-Airbnb
*Ikhabhinethi yaMaplanga eyohlukileyo* iibhedi ezi-4 ezinemizuzu engama-20 ukusuka eTyeya
Ikhabhathi yethu ye-2 ye-AirBnB kwipropathi isinike amava okwenza le ibentle nayo!
Emaphandleni, ecocekileyo, yaye enoxolo!
Indlu yethu inamagumbi amabini okulala; enye inomandlalo wendlovukazi, kwaye kwigumbi eliphezulu elinye linokumkanikazi kunye namawele amabini. Inekhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, umgodi womlilo kunye neegrill zangaphandle. Ilungele izibini ezimbini, abahlobo, okanye iintsapho ezincinci.
I-Ark Encounter kunye neKentucky Horse Park ziku-20min kude. IMyuziyam yeNdalo ikumgama oyi-45min. Indawo entle yokuphumla phakathi kotyelelo kwezi zinto zinomtsalane!
Icocekile, ilula, kwaye iyaphumla. Akukho bamelwane. Uxolo kodwa asinayo iWiFi.
Ngaphandle, ujikelezwe ngamaplanga anomlambo omncinci ngasekhohlo kwendlwana. Nceda ungabangeli kude kakhulu nendlwana njengoko imigca yepropathi yasentshona ilapha ngasemva kwayo. Kukho imfumba yeenkuni kunye nequla lomlilo elilungele ukuhamba.
Igumbi lokulala eliphambili kumgangatho ophambili, linebhedi yobukhulu bokumkanikazi kunye nomnyango okhawulezayo wokuhlambela ngokupheleleyo. Uyakwazi ukuvula iifestile okanye usebenzise i-air conditioner ukuze uhlale upholile ehlotyeni. Isifudumezi se-infrared esinganyanisekanga siya kugcina igumbi lishushu ebusika ukuba kufuneka ubushushu obongezelelweyo.
Umgangatho ophezulu unebhedi enkulu kunye neebhedi ezimbini ezingamawele. Ungalala ngefestile evuliweyo, okanye usebenzise isipholile-moya phezulu xa kuyimfuneko. Umatrasi womoya we-queen kunye ne-pack n play yabantwana zigcinwa apho ukuba uzifunela abantu abongezelelweyo. Umatrasi womoya ungathatha indawo enkulu yegumbi lokuhlala ezantsi kodwa unokuza luncedo ngepinch. Sikwanayo neTV ekumgangatho ophezulu enesikolo esidala i-Atari esiqhagamshelwe kuyo ukonwatyiswa okuthile.
Ikhitshi eligcweleyo linesitovu, imicrowave, ifriji enefriji, itoaster, umenzi wekofu kunye nesinki ephindwe kabini. Sinazo iimbiza/iipani ezisisiseko, izinto zesilivere, kunye nezixhobo zokupheka ezifunekayo ekuphekeni ngaphakathi okanye ukosiwa ngaphandle kwi-Weber charcoal grill yethu, okanye i-gas grill. Amalahle okuthotyelwa abonelelwa ngeepleyiti zephepha, kunye neetawuli zephepha. Okokugqibela, kumenzi wekofu oqhelekileyo, sibonelela ngekofu encomekayo ngeswekile kunye neekhrimu ukuze uyisebenzise.
Igumbi lokuhlala linesitulo sokuhlala, ibhedi yesikhumba ephindwe kabini, izitulo ezimbini, kunye ne-TV yescreen esicaba kunye nebar yesandi. Iitshaneli zeTV eziNgqongileyo eziSisiseko kunye nomdlali weDVD oqhelekileyo oneentlobo ngeentlobo zeemuvi ezibonelelweyo. Kukwakho neblue tooth speaker kwi-mantle ukuze udlale umculo wakho. Iintlobo ngeentlobo zemidlalo yebhodi ziyafumaneka ngokunjalo.
Ekugqibeleni, igumbi lokuhlambela likwinqanaba elisezantsi le-cabin. Ishawari enzulu/i-combo yebhafu ilungele iishawari zabantu abadala okanye iibhafu zabantwana. Igumbi lokuhlambela lineetawuli ezitsha, iimpahla zokuhlambela, isomisi seenwele, kunye nebhodi yoku-ayina ukuze uyisebenzise ngeshampu encomekayo kunye nesepha yeshawa. Iwasha encinci kunye nesomisi ziyafumaneka kwigunjana lokuhlambela ukuze uyisebenzise nawe.
Nangona i-cabin ikwindawo yasemaphandleni, isondele kwizinto ezininzi ezinomtsalane.
I-Ark Encounter yi-15 miles, imizuzu eyi-17 emantla eWilliamstown.
IMyuziyam yeNdalo ikwiikhilomitha ezingama-57, imizuzu engama-55 emantla ePetersburg.
I Kentucky Horse Park 23 miles, 25 imizuzu emazantsi Lexington.
Town Branch Distillery yi 31 miles, 35 imizuzu kude Lexington.
Buffalo Trace Distilleries yi 36 miles, 48 imizuzu kude Frankfort.
Keeneland Race Track yi 37 miles, 40 imizuzu kude e Lexington.
Woodford Reserve Distillery yi 47 miles, 49 imizuzu kude Versailles.
Wild Turkey Distillery yi 51 miles, 58 imizuzu kude e Lawrenceburg.
Iimayile ezi-3 ukusuka kwiVenkile yeDola e-Corinth, kunye nemizuzu engama-20 ukusuka eWalmart/Kroger, ukuthenga, kunye neendawo zokutyela eGeorgetown, okanye iDry Ridge.
My wife, Megan and I have a 7 yr old son, Harrison, and a 1.5 yr old boy Henry. We enjoy boating in the summers and campfires in the winter.
I’m in the animal health industry, and Megan is a registered veterinary nurse and hospital manager.
The cabin is on the family farm I grew up on.
I’m in the animal health industry…
Ndiza kukunika ikhowudi yeedijithi ezi-4 zomnyango wangaphambili kunye nekhowudi yesango ngaphambi kokuba ufike. Ndihlaziya ikhowudi yondwendwe ngalunye ukuze kuphela ungene. Asiyi kucwangcisa ukuba khona ngaphandle kokuba ungathanda ukuba sibe.
Ndifumaneka ngefowuni, umbhalo, okanye i-imeyile nangaliphi na ixesha. Nceda ungabi neentloni malunga nokubuza into ukuba unemibuzo malunga nantoni na.
Ndiza kukunika ikhowudi yeedijithi ezi-4 zomnyango wangaphambili kunye nekhowudi yesango ngaphambi kokuba ufike. Ndihlaziya ikhowudi yondwendwe ngalunye ukuze kuphela ungene. Asiyi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sadieville